Madaxwayne CMC Oo khudbad Dhaxalgal ah Kasoo Jeediyay Shirwaynihii 10,aad Ee EPRDF - Cakaara News
Madaxwayne CMC Oo khudbad Dhaxalgal ah Kasoo Jeediyay Shirwaynihii 10,aad Ee EPRDF
Maqale(CN) Jamce, 28ka August 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka furitaankii shirwaynihii 10,aad ee xisbiga EPRDF kajeediyay khudbad dhaxalgal ah oo dhinacyo badan taabanaysa.
khudbadan oo runtii ahayd mid si wayn usoo jiidatay dhagaha hoolka ayuu madaxwaynuhu hadalkiisii kubilaabay,''Marwooyin iyo mudanayaal anigoo wax walba kahormarinaya magaca XDSHSI, bagaan nabad ugu gaadhnay shirwaynaha 10,aad ee xisbiga yehadhig ee halkudhagiisu yahay Hanaanka koboca iyo isbadalka dhaqaalaha''.
Wuxuuna madaxwaynuhu khudbadiisii ku sheegay inaan marnaba la iloobi karin halgankii ay 25 sano kahor yehadhig ugashay shacabwaynaha dalkeena ee ay xooga kaga qaaday xukunkii cadaadiska dhargiga ee kaligii taliska ahaa, boqolaal geesiyaal naftood hurayaal ahna ay halkaa kugeeriyoodeen.
Waxaa kale oo iyana madaxwaynuhu carabka kudhuftay gurigana soo jiitay in deegaanka soomaalidu uu horay u ahaa meel aan nabadgelyo kajirin, dadkana lagu xasuuqo balse 5tii sano ee udanbaysay ay nabadgelyo iyo horumar 100% ah kahirgaleen deegaanka taasoo kutimid kadib markii ay dhalinyaro aqoonyahano ah oo udhalatay deegaanku ay kumidoobeen XDSHSI oo ay isbadalo dhan kasta ah kakeenaan xaaladihii deegaanku markaa kujiray. Isbadaladii ay keeneena waa kuwan maanta nabadgelyo lagu hadhsanayo horumarkana lagu gaadhay.
Ugudanbayna wuxuu madaxwaynuhu sheegay in shirwaynahan 10,aad uu kaga duwanaa shirwaynayaashii hore qodobo dhawr ah oo ay kamid ahaayeen: Inuu kusoo aaday xili lahirgaliyay GTP1 oo sababtay in doorashadii 2007TI shacabku si xor ah ugu doorteen codkooda xisbiga EPRDF horumarka ay gaaadhsiiyeen dalka guud ahaan, Xili lagu jiro xuskii sanadguuradii 3,aad ee geeridii raisal wasaarihii hore ee Ato Meles kasoo wareegtay, Xili dalku kufilaaday nabadgelyadiisa oo uu caawinayo nabadgelyada Africa. Guulo laxaadlehna uu kazoo hoyiay dagaalada uu Al-qushaash kula jiro. Caalamkuna uqiray iyo waliba xili lasameeyay qorshayaashii GTP2 hirgalintoodana loo fadhiyo.
Hadaba go'aamada shirkan kasoo baxa ayaana noqon doona sidii EPRDF looga bartay kuwo kusalaysan jihooyinka horumarineed ee lagaga mid noqonayo wadamada dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay